Somaliland: Wasiir Warancadde Oo La Sheegay Inuu Hubaynayo Maleeshiyo Beeleed Jufadiisa Ah Oo Ka Soo Horjeedda Magacaabista Degmada Balli Mataan. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiir Warancadde Oo La Sheegay Inuu Hubaynayo Maleeshiyo Beeleed Jufadiisa Ah...
Wasiirka wasaarda Arrimaha Gudaha Cali Maxamed Warancade ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq uu doonayo inuu ku fashilo goaankii Madaxwaynaha Axmed Siilanyo uu ugu dalacsiiyay tuulada Bali mataan degmenimo, isla markaana uu colaad uga dhex abuuri lahaa beelaha wada dega degmadan cusub.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay islamarkaana ka agdhow wasiir warancade ayaa qaar ka mid ah saxaafada u xaqiijiyay in wasiir warancade maalmahan ba ku fooganaa hubaynta maleeshiyaad beeleed wasiir warancade abaabulay si uu colaad uga dhex abuuro beelaha walaalaha ah ee wada dega degmadan cusub ee Bali Mataan.
Wasiir Warancade oo wasaaradiisu masuul ka tahay degmooyinka dalka ayaa ka baaqday inuu ka qayb galo xaflad Dorraad Sabtidii loo sameeyey wanqasha degmada cusub ee Balli Mataan oo ka tirsan gobolka Hargeysa taasoo uu dhawaan madaxweyne Siilaanyo u dallacsiiyey degmo nimo iyada iyo lix degmo oo kale.
Ilo wareedyadan ayaa waxa kale oo ay u xaqiijiyeen saxaafada in wasiir Warancade ku fooganaa hubaynta iyo abaabulida maleeshiyaad beeleed isaga ka amar qaata kahor intii aan la qaban xafladii loogu wanqalayay degmada Bali Mataan.
Dahabshiil Co-sponsors Somali investment forum concluded in Nairobi
Somalia: Puntland oo canbaareysey Mooshinkii ka dhanka ahaa Baarlamaanka Jubaland